Waxay abuuraan chess leh saxan Arduino UNO | Qalabka bilaashka ah
Waxay abuuraan chess leh saxan Arduino UNO
Waxaa jira dhowr nooc oo chess ah oo lagu dhisay Qalab Bilaash ah. Ujeeddada ciyaartoy badan oo ka tirsan chess-ka ayaa ah inay dhisto chess elektaroonik ah oo qofku kula ciyaari karo mashiinka ama si fudud dhaqdhaqaaqyadooda loo badbaadin karo oo elektaroonig ahaan loogu diro.
Xaaladdan oo kale waxaan leenahay mashiin la mid ah kaas wuxuu ciyaari karaa chess wuxuuna xitaa noo dhaqaajin karaa qaybaha, laakiin waxaa la yaab leh in qalabkeedu uusan ahayn mid aad u awood badan, wuxuu u baahan yahay uun saxan Arduino UNO.
Saxan ka mid ah Arduino UNO waa saxan la awoodi karo oo badan laakiin sidoo kale aan awood badan lahayn hadaan isbarbar dhigno looxyada kale sida Arduino MEGA ama Raspberry Pi. Adeegsiga guddigan, RoboAvatar, abuuraha mashruucan, wuxuu adeegsaday qaab dhismeedka 'XYZ', oo ah qaab isku mid ah oo loo isticmaalo daabacadaha 3D.
Qaab-dhismeedkan waxaa lagu caawin doonaa qaybo magnetized ah oo u oggolaan doona mashiinka inuu helo qaybaha si fiican u saxsan. Marka lagu daro Arduino UNO iyo qaabdhismeedka, RoboAvatar waxay adeegsatay Mux Shield iyo labo ka mid ah MCP23017 I / O chips chips. Intaas waxaa sii dheer, abuuraha wuxuu hindisay barnaamij Python ah oo ka caawiya ku shaqeynta dhammaan qalabka oo leh natiijada ka dhalata ciyaarta Chess.
Nasiib wanaag mashruucani waa bilaash waana la dhisi karaa wakhti kasta. Tan waxaan kaliya u baahannahay inaan helno walxaha dhismaha oo aan ku dhisno iyada oo loo eegayo tallaabooyinka hagaha dhismaha in RoboAvatar ay ku dhajisay Instructables. Iyo halka aan ka heli karno dhammaan barnaamijyada lagama maarmaanka u ah in mashruucu shaqeeyo.
Mashruucan mashiinka chess waa mid aad u xiiso badan, laakiin ma joogsanayo noqo xal qaali ah barnaamijka chess-ka kombuyuutarka. In kastoo fikradda ah in la isticmaalo saxan Arduino UNO mashruucan noocan ah waxay umuuqataa mid aad uxiiso badan xitaa way suurta gal tahay in la dhiso daabacaad 3D ah oo leh taarikada noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Waxay abuuraan chess leh saxan Arduino UNO
Ultimaker wuxuu diirada saari doonaa horumarinta softiweerka daabacaadda 3D
Ku Dhis Wiilka Ugu Ciyaaraha Weyn Dunida Raspberry Pi iyo Xeel Dheer Badan